NTSAY CHRISTIAN : Tafaverina amin’ny toeran’ny lehiben’ny Governemanta
Ny Praiminisitra teo aloha Ntsay Christian ihany no notendren’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ho Praiminisitra lehiben’ny governemanta. Foana avokoa araka izany izay didim-panjakana mifanohitra amin’io fanapahana noraisin’ny Filoha io. 22 juillet 2019
Omaly tamin’ny 4 ora tolak’andro no novakian’ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidiana ny Repoblika ny didim-panjakana laharana faha 2019-1407 izay manendry ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta vaovao. Didim-panjakana navoakan’ny Filoha Andry Rajoelina tao aorian’ny nanoloran’ireo solombavambahoaka maro an’isa ny anaran’izay ho praiminisitra.
Nihazakazaka tokoa ny fandehan’ny raharaham-pirenena tamin’iny herinandro iny. Ny alatsinainy teo no nanomboka ny fivoriana ara-potoana voalohany ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza ary efatr’andro monja taorian’io dia efa natolotry ny vondrona politika manana ny solombavambahoaka maro an’isa tamin’ ny Filoham-pirenena ny anaran’izay ho Praiminisitra, araka ny voalazan’ny andininy faha-54 ao anatin’ny Lalàmpanorenana. Tsy niandry ela tamin’ny fanapahan-keviny ihany koa ny Filoha fa ny ampitson’io ihany dia efa nandray ny didim-panjakana mifanaraka amin’ny fanendrena ny Praiminisitra.
Haingam-pandeha ity fitondrana ity ka tsy azo itavozavozana ny raharaham-pirenena mba hitondrana fampandrosoana ao anatin’ny fotoana fohy. Heverina ho anisan’ny antony nanafaingana ny fanendrena izany, izay hisahana ny toeran’ny lehiben’ny governemanta. Voarakitra tao anatin’ity didim-panjakana navoakan’ny Filoha, omaly ity fa ny Praiminisitra teo aloha Ntsay Christian ihany no tafaverina amin’ny toeran’ny lehiben’ny governemanta.
Natolotry ny Solombavambahoaka miisa 104
Solombavambahoaka miisa 104 no fantatra fa nanao sonia nanolotra ny anaran’i Ntsay Christian ho Praiminisitra. Ny 84 tamin’ireo dia ireo solombavambahoaka maro an’isa voafidy tao anatin’ny vovonana Ird ary ny ambiny kosa ireo solombavambahoaka tsy miankina vonona hiara-dia amin’ny fitondram-panjakana. Feno tanteraka araka izany ny fepetra maha Praiminisitra ny tenany, ary voahaja ihany koa ny voalazan’ny lalàna tamin’ny fomba nanendrena azy. Raha tsiahivina dia tao anatin’ny 13 volana izay no efa nitana ity andraikitra ity ny Praiminisitra Ntsay Christian. Ny fito volana tamin’io nandritra ny fitantanana ny governemantan’ny marimaritra iraisana ary enim-bolana kosa taorian’ny nanendren’ny Filoha azy ny volana janoary lasa teo.
Efa betsaka ireo ezaka vitany tao anatin’izay fotoana izay raha tsy hilaza afa-tsy ny fandraisany anjara betsaka mba hamerenana ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Teo ihany koa ny fidirana an-tsehatra sy ny fanelanelanana nataony tamin’ireo Distrika nisehoana korontana teto Madagasikara. Nambaran’ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidiana ny Repoblika fa foana avokoa izay didim-panjakana rehetra mifanohitra amin’ity didim-panjakana vaovao vao navoakan’ny Filoham-pirenena ity. Araka izany dia andrasana indray ny fitsanganan’ny governemanta vaovao. Raha ny tsiliam-baovao voaray dia tsy azo ihodivirana ny hisian’ireo minisitra teo aloha hoesorina amin’ny toerany ary hisy solombavambahoaka ihany koa hotendrena handrafitra ity governemanta vaovao vao hatsangana ity.